U-Obama, uCheney umenyiwe, nawe unjalo: INgqungquthela Yobuholi yase-Virtual yase-Asia Ekwakhiweni Kokuthenjwa Nokubambisana
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Zokuhlangana Komkhakha » U-Obama, uCheney umenyiwe, nawe unjalo: INgqungquthela Yobuholi yase-Virtual yase-Asia Ekwakhiweni Kokuthenjwa Nokubambisana
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Imfundo • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Abantu • Ukuphepha • ISouth Korea Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
I-World Tourism Network (WTN) kanye ne-Amforth izimema eTurboNews abafundi kwiNgqungquthela Yobuholi Base-Asia Evela eSeoul, Korea.
Iphaneli elinezinkanyezi zonke labaholi bezokuvakasha lizocabanga kabusha ngezinqubomgomo zezokuvakasha zekusasa kanye nentsha yethu engqungqutheleni ezayo ye-Virtual Asia Leadership eKorea.
Amalungu e-Amforth, iWorld Tourism Network, ne-African Tourism Board bayamenywa ukuthi babekhona ngaphandle kwenkokhiso.
Ukwakhiwa kabusha kweTrust and Cooperation yingqikimba yengxoxo yesigungu ehlelwe yi-Amforth ngaphansi kokongamela yiNxusa laseKorea uDho young-shim noPhilippe Francoise, umongameli wase-Amforth.
eTurboNews izosakaza bukhoma ingqungquthela ezayo. Umhlaba ngemuva kwe-COVID-19: Ukwakha Ukwethembana Nokubambisana. Lokhu kungumphumela olindelekile wemibono engqungqutheleni ngokubambisana ne-Amforth.
eTurboNews umshicileli uJuergen Steinmetz, ophinde abe yilungu lebhodi ku Amforht, kanye noSihlalo we Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba uthe: “Sijabule kakhulu ukusiza lolu hlelo olubalulekile futhi sibheke phambili ukululetha emhlabeni wabasebenzi bezokuvakasha emhlabeni wonke ngesikhathi sangempela. Sijabule kakhulu ukuthi abanye babafundi bethu abangamalungu eWorld Tourism Network, i-African Tourism Board, ne-Amforth bangaba yingxenye yabalaleli. ”
Vakashela https://worldtourismevents.com/event/asian-leadership-conference/ ukuthola okuningi nokubhalisela umcimbi kaJuni 30 / Julayi 1.
Abantu abaningi emhlabeni jikelele bagonyelwe i-COVID-19. Kwamanye amazwe, njenge-United States kanye ne-Israel, abantu bakhumula izifihla-buso zabo babuyela ezimeni ebezandulela ukubhebhetheka. Kuzokwenzekani embonini yezokuvakasha esikhathini se-post-corona? Umkhakha wezokuvakasha womhlaba ucishe wama eminyakeni emibili edlule ngenxa ye-COVID-19. Uma uhambo lokuwela umngcele luqala kabusha, ngabe abantu bazohamba umhlaba wonke njengoba benza ngaphambi kobhadane? Kulesi seshini, ochwepheshe bezokuvakasha abanjengoDo Young-shim, owayengumongameli we-UN World Tourism Organisation (ST-EP) Foundation kanye nenxusa loMkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha, bazobhunga ngomkhakha wamahhotela nezokuvakasha esikhathini sangemva kwe-corona.
Umsunguli weSarath Trust kanye Nezingane eziseCrisis, owayeyiNkosana uCrown yaseNgilandi iNkosana u-Andrew
UDuchess Sarah Ferguson wayengunkosikazi wangaphambili weNkosana u-Andrew, isikhulu sesibili sika-Elizabeth II. Wayeyilungu lomndeni wasebukhosini waseBrithani iminyaka eyishumi kusukela ngo-10 kuya ku-1986 futhi wanikezwa isihloko seDuchess yaseYork yiBritish Royal Family. Wabhala imisebenzi eminingi njengophilanthropist nanjengombhali wezinganekwane. Usungule inhlangano esiza abantulayo i-Children in Crisis ngo-1996 neSarah Ferguson Foundation ngo-1993. Isisekelo siseNew York futhi sisebenzela inhlalakahle yezingane emhlabeni wonke. Yize ahlukanisa neNkosana u-Andrew, umndeni wasebukhosini waseBrithani usamphatha 'njengomama wamakhosazana'.
Umeluleki Oyinhloko Oyinhloko eMnyangweni Wezokuvakasha waseSaudi Arabia, uMongameli kanye ne-CEO yeWorld Travel and Tourism Association (WTTC)
UGloria Guevara, uMeluleki Omkhulu Oyinhloko weSaudi Arabia eMnyangweni Wezokuvakasha, ungusihlalo kanye ne-CEO yeWorld Travel and Tourism Association (WTTC). Usebenze njengoNgqongqoshe Wezokuvakasha eMexico kusukela ngo-2010 kuya ku-2012. Uneziqu ze-BS kuComputer Science azithola e-University of Anahuac, eMexico, kanye ne-MBA yaseKellogg School of Management. Ukuqala nge-NCR Corporation, umphakeli we-software we-point-of-information information management (POS) womhlaba wonke ngo-1989, uSihlalo uGuevara wasebenza njengomphathi wezokulawulwa kwempahla nephrojekthi embonini ye-IT eNyakatho Melika, eLatin America, eMiddle East nase-Afrika. UGloria Guevara ubelokhu esemkhakheni wezokuvakasha kusukela ngo-1995. Ikakhulukazi, wayephethe izikhundla ezifana neManaging Director, Customer Service & Operations, Vendor Management, kanye neService Solutions kwaSaber Travel Network, inkampani ye-IT ehlobene nomkhakha wezokuvakasha womhlaba wonke, kwabangu-14. iminyaka nezinyanga eziyi-7 eTurboNews wamqamba ngokuthi “Owesifazane Onethonya Elikhulu EMexico” Ungumeluleki okhethekile weHarvard TH Chan School of Public Health futhi uyilungu leBhodi Yezeluleko Yezokuvakasha Nezokuvakasha yeWorld Economic Forum, kanye neLucerne Think Tank yeWorld Tourism Forum.
Iphini Likamongameli Wezemininingwane, PhambiliKeys
U-Olivier Ponti, iSekela likaMongameli we-Insights, i-ForwardKeys yisiphathimandla somhlaba wonke ocwaningweni lwemboni yezokuvakasha nokumaketha kwezokuvakasha. UPonti wasebenza njengomphathi wezocwaningo weqembu lokumaketha lase-Amsterdam. Ngaleso sikhathi, kwakusiza kakhulu ukuheha ezokuvakasha kanye nokutshalwa kwezimali kwamabhizinisi e-Amsterdam. Usebenze njengoSihlalo weqembu i-European Urban Marketing (ECM) Research & Statistics kwaze kwaba nguJuni 2018. Ubambe iqhaza elibalulekile ekwakheni amathuluzi nemibiko yocwaningo kanye nokusungula ukubambisana kwamasu. Uneziqu ze-master kwezomnotho azithole eSayensi-Po yaseParis naseziqu zemasters kwezokuvakasha ezivela eUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Njengamanje ufundisa eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Kwezokuvakasha ePanthéon Sorbonne.
I-CEO, iPacific Asia Travel Association (PATA)
U-Liz Ortigera, isikhulu esiphezulu se-Pacific Asia Travel Association (PATA), unguchwepheshe oneminyaka engaphezu kwengama-25 yesipiliyoni somhlaba wonke nolwazi ekuphatheni, ukumaketha, ukuthuthukiswa kwebhizinisi, kanye nokuphathwa kwenethiwekhi yabalingani. Umsebenzi ka-Ortigera uhlanganisa izimboni eziningi, kufaka phakathi ukuhamba nendlela yokuphila, ubuchwepheshe, izinsizakalo zezezimali, kanye nemithi yokwelapha. Usebenze ezinkampanini zamazwe amaningi ezinjenge-American Express neMerck, kanye nezinkampani ze-IT ezihlobene nesoftware njengensizakalo (SaaS), e-commerce kanye nemfundo. Usebenze njengeMenenja Jikelele yesiFunda iminyaka eyishumi kwi-Amex (American Express )'s Global Business Travel Partner Network e-Asia Pacific. U-Ortigera uthole iziqu eziphindwe kabili kwezobunjiniyela bamakhemikhali kwa-Cooper Union nasekhemistry evela eNew York University (NYU). Wabuye wathola i-MBA evela e-Columbia Business School.
Lowo owayenguNobhala-Jikelele we-United Nations World Tourism Organisation
UTaleb Lipai, owayenguNobhala-Jikelele weNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba, ungunobhala-Jikelele Wezizwe Ezihlangene wokuqala owazalelwa eJordania. Kusukela ngo-2006 kuya ku-2009, ubesebenza njengephini likanobhala-jikelele we-United Nations World Tourism Organisation, kwathi ngo-2010 kuya ku-2017, waba nguNobhala-Jikelele. Ngesikhathi sakhe sokuba nguNobhala-Jikelele, wenyusa umnikelo wemboni yezokuvakasha ezimakethe zomhlaba ezishintsha ngokushesha futhi wahlela kabusha uhlelo lwezokuvakasha kanye nohlelo lokuhlola. Ngaphambi kukanobhala-jikelele we-UN World Tourism Organisation, ubesebenza njenge-CEO yenkampani kasimende ephethwe nguhulumeni waseJordanian futhi waphumelela ekwenzeni inkampani kahulumeni ibe ngeyokuqala ngqa eJordani. Ubuye wasebenza njengoNgqongqoshe Wezokuvakasha eJordani.
Usihlalo kanye ne-CEO, iWorld Tourism Forum (WTFL) uLucerne
UMartin Bass unguSihlalo kanye noMphathi Omkhulu We-World Lucerne Tourism Forum. UMartin Bass waqala umsebenzi wakhe ngonyaka we-1994 nenkampani yamahhotela nezokudla iMovenpick Group. Ngo-1997 waqokwa njengoNobhala-Jikelele we-Movenpick Group futhi wabheka ezomthetho, ukulamulwa kwezezakhiwo kanye nezinsizakalo zabasebenzi. Ngemuva kwalokho waba nentshisekelo kwezokuvakasha nezindawo zokulala, kwathi ngo-2001 wazama ukuphatha izindawo zamahhotela nokukhuthaza ezokuxhumana. Ngo-2003, wayengusihlalo womkhakha wezokuVakasha nezokuThutha e-University of Applied Sciences and Arts Lucerne. Ngo-2009, Kwakuhlelwe futhi kwahlelwa i-World Lucerne Tourism Forum ukukhuthaza umkhakha wezokuvakasha ngokubambisana nabamele nongqongqoshe bezwe ngalinye. Wenza ukubonisana komhlaba wonke ngokugqugquzela ezokuvakasha nokuphathwa kwamahhotela.
UFrancesco Frangialli unguNobhala-Jikelele wangaphambilini we-United Nations World Tourism Organisation (WTO). Usebenze njengeVice-Chancellor yeWorld Tourism Organisation kusuka ngo-1990-1996, waphinde waqokelwa amahlandla amathathu alandelanayo kusukela ngo-1998-2009. Wenza iWorld Tourism Organisation, okuyinhlangano engekho ngaphansi kukahulumeni (NGO), eyayingaphansi kwe-United Nations. Esesikhundleni sakhe, wamukela i-World Tourism Code of Ethics, eyisisekelo 'sokuhamba ngendlela efanele' ukuze kulondolozwe umnotho, imvelo namasiko ezwe eliya kulo. Uphinde waveza nokuthi ezokuvakasha kufanele zibe yinto esemqoka kwi-ajenda yamazwe omhlaba ukuze kutholakale intuthuko esimeme kanye ne-United Nations Millennium Development Goals. UNobhala-Jikelele uFrancesco usebenze njengoSolwazi Emeritus e-Faculty of Hotel Management eHong Kong Polytechnic University kwaze kwaba ngu-2016, ecwaninga ezokuvakasha nezokuvakasha kwamanye amazwe. Iphepha elimele .
USheika My Bint Muhammad Al Khalifa
UNgqongqoshe Wezamasiko waseBahrain
USheika Mai Bint Mohammad Al Khalifa, owayenguNgqongqoshe Wezamasiko waseBahrain, usungule ingqalasizinda yamasiko yokulondolozwa kwezinsalela zeBahraini namagugu kanye nemboni yezokuvakasha esimeme. Wasungula iShaikh bin Mohammed Al Khalifa Cultural Centre futhi waba nguSihlalo weBhodi Yabaqondisi kusukela ngo-2002. Iphinde yasungula iMnyuziyamu yaseBahrain Port Sight kanye nezindawo ezinkulu zamasiko eBahrain. Wabalwa phakathi kuka- # 6 phakathi kwabesifazane abanethonya elikhulu eMpumalanga Ephakathi ngonyaka wezi-2014. Waba negalelo ekuqokeni imboni yamaparele esiqhingini saseMuharraq, eBahrain, njengeNdawo yamaGugu yoMhlaba ye-UNESCO. Ngokubona le mpumelelo, wanikezwa umklomelo we-Arab Woman Wonyaka ka-2015. INkosi uHamad yaseBahrain nayo imnikeze i-Order of the First Class. Ngo-2020 waqokwa njengoNobhala-Jikelele we-World Tourism Organisation.
Ilungu lePhalamende laseYurophu
U-Istvan Ujhelyi, owayeyilungu lePhalamende Likazwelonke laseHungary, waphothula iziqu zeFakhalthi Yomthetho eSzeged University wajoyina iHungary Socialist Party (MSZP). Uke wasebenza njengoNgqongqoshe Wezwe ngokusebenzisa uMnyango Wezohulumeni Basekhaya Nokuthuthukiswa Kwezifunda. Kusukela ngo-2006 kuya ku-2010, wayengusihlalo weNational Tourism Commission. Ngemuva kokukhethwa ePhalamende laseYurophu ngo-2014, wakhethwa njengosihlalo weKomidi Lezokuvakasha leKomidi Lezokuthutha Nezokuvakasha. Ku-2019, waqokwa njengeSekela Sihlalo weKomidi Lezangaphandle I-European Parliament.
Ubengamele izinqubomgomo zezokuvakasha ezifana 'ne-EU-China Tourism Year 2018' kanye ne 'European Tourism Capital Project'. Uphinde wasungula futhi waba ngusihlalo weKomidi Lokuthuthukiswa Kwezokuvakasha Kwamasiko ase-Europe-China.
Iphini Likamongameli wePhalamende laseYurophu
UDimitrios Papadimoulis, Iphini likaSihlalo wePhalamende laseYurophu, ungusopolitiki waseGrisi omele i-'Left-Nordic Green Left 'ePhalamende laseYurophu. Uyilungu leKomidi Lezabelomali lePhalamende laseYurophu, iKomidi Lezomnotho kanye Nezezimali kanye ne-European-American Relations Delegation. Uthathwa njengomunye wosopolitiki abanamandla kakhulu ePhalamende laseYurophu. Uqokwe njengelinye lamalungu ePhalamende aphezulu ayishumi anethonya elikhulu ePhalamende laseYurophu ngonyaka we-10.
Imeya yaseSeoul, Korea
Imeya yama-38 yaseSeoul. IMeya u-Oh Se-hoon uthweswe iziqu eKorea University Law School waphasa i-26th Bar Exam. Ngemuva kwalokho wasebenza njengommeli noprofesa waseyunivesithi ngaphambi kokungena kwezepolitiki. Wakhethwa njengelungu lesi-16 lePhalamende Likazwelonke futhi wasebenza njengemeya yama-33 neyama-34 eSeoul.
IMeya u-Oh uhlele iSebitseom neDongdaemun Design Plaza njengohlelo lokudlulisa izinto zokuhamba zomphakathi endaweni yedolobha elikhulu kanye nemboni ye-Design Seoul. Uphinde waba ngowokuqala emhlabeni ukunikezwa i-United Nations Public Administration Award (UNPSA) iminyaka emine ilandelana.
U-Elena Kountoura, Ilungu lePhalamende laseYurophu, ungusopolitiki owayesebenza njengoNgqongqoshe Wezokuvakasha eGrisi. Ungene ePhalamende lamaGrikhi ngesikhathi ekhethwa ukuba abe yiphalamende lase-Athene. Uyilungu leKomidi Lezokuthutha Nezokuvakasha lePhalamende laseYurophu, iKomidi Elikhethekile le-AI neDigital Age, kanye neKorea International Relations Delegation. Ngaphambi kokungena kwezepolitiki, ubesebenza ezikhundleni eziningi, kubalwa imodeli yaphesheya, umqondisi kamagazini besifazane, nomsubathi wezemidlalo.
Usihlalo we-UN Sustainable Development Goals Advisory Committee, i-World Travel and Tourism Association (WTTC) Ambassador
UDo Young-shim, usihlalo weKomidi Eleluleka Ngezinjongo Zokuthuthukiswa Kwezinhlelo Ezisimeme ze-UN, ubelokhu ehamba phambili ekuxazululeni ukungalingani kwezenhlalo emazweni angathuthuki kahle nasezifundeni zase-Afrika ngokwakhiwa komkhakha wezokuvakasha iminyaka engaphezu kwengu-20. Usihlalo Do uhole iWorld Tourism Organisation Step Foundation, okuyinhlangano yokuqala ehlangene ne-UN eKorea, kusukela ngo-2004. IStep Foundation yasungulwa ngenhloso yokuqeda ububha ngokusebenzisa imboni yezokuvakasha esimeme emazweni angathuthukile. Usihlalo Do ubelokhu ezama ukwenza iKorea yaziwe emhlabeni. Usebenze njengosihlalo wekomidi lokukhuthaza 'Ukuvakashela Korea Unyaka' ngo-2001, inxusa lokubambisana kwamasiko eMnyangweni Wezangaphandle Nezohwebo kusukela ngo-2003 kuya ku-2004, kanye nenxusa lezokuvakasha nezemidlalo eMnyangweni Wezangaphandle Nezohwebo ngo-2005.
Umphathi Jikelele we-Amport, i-International Association for the Development of World Tourism
UMongameli uPhilippe Francois njengamanje ungumphathi jikelele weWorld Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORH), okuyinhlangano yamazwe omhlaba yokuthuthukisa imboni yezokuvakasha emhlabeni jikelele. Ubelokhu esebenza ezinhlanganweni zamazwe omhlaba ezihlobene nezokuvakasha, ukungenisa izihambi nezindawo zokudlela kusukela ngo-1992. Ubambe iqhaza emiklamweni yamazwe angaphezu kuka-130, okubandakanya ukuthuthukiswa kwabasebenzi, ukuklanywa nokuhlelwa kwezindawo okusimeme, nokusungulwa kanye nokuthuthukiswa kwezinhlangano eziqeqeshiwe. Ngo-1994 wasungula i-FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS, okuyinkampani enikezela ngezinsizakalo zokubonisana namazwe omhlaba emkhakheni wezentuthuko esimeme kanye nokuphathwa kwabasebenzi. Uneziqu zeMBA ekuhlelweni nasekuklanyeni kwezokuvakasha azithola eNyuvesi yaseBordeaux, eFrance.
Owayengumphathi omkhulu, i-Asia Pacific Tourism Association
UMario Hardy ngumphathi wangaphambili we-Asia Pacific Tourism Association (PATA). Uke wasebenza njengomeluleki webhodi labaqondisi eVin Capital, inkampani yamabhizinisi amakhulu aseMalaysia, iSirium, inkampani yaseBrithani yezobunhloli kanye ne-analytics, kanye ne-International Association of Business Executives (GCBL), inhlangano engenzi nzuzo ekhuthaza ukusebenzisana phakathi kosomabhizinisi abasezingeni lomhlaba. Kusukela ngo-2013, ubesebenza njengoMqondisi Ophethe we-MAP2VENTURES, inkampani yokutshala imali eSingapore. Uphinde wamenywa njengesikhulumi ku-'Digital Tourism Summit 2020 ', okuyinkomfa enkulu kunazo zonke embonini yezokuvakasha esifundeni sase-Asia-Pacific.
Iphini Likamongameli Ophakeme, uMnyango Wobulungu Bomhlaba Wokuvakasha Nezokuvakasha (WTTC), uMnyango Wezokukhangisa Nemicimbi
IPhini likaSihlalo uMaribel Rodriguez uphethe ezokukhangisa e-World Travel and Tourism Association (WTTC). Kusukela ngo-2014 kuya ku-2019, ubengamele iSouthern Europe neLatin America kwiWorld Travel and Tourism Association (WTTC). Uke wasebenza njenge-Public Relations Officer noMqondisi weTravelodge Hotels eSpain futhi uke wasebenza kwiKhomishini yeHhotela laseMadrid neKhomishini Yezokuvakasha. Njengamanje, umkhankaso we '#Women Leading Tourism' uyaqhubeka. Uneziqu ze-BA in Industrial Psychology azithole e-University of Salamanca, Spain ne-EMBA evela ePontifical University of Comillas.
Ukuthola eminye imininingwane nokubhaliswa iya ku https://worldtourismevents.com/event/asian-leadership-conference/
Umongameli we-Amforht uPhilipple Francoise ubesanda kuvulwa eTurboNews IDaily News ikhuluma ngalo mcimbi: